1000w / 2000w / 3000w COB Yakanyanya kuzere Specturm yakatungamirwa kukura kwechiedza cheHydroponics, Horticulture, Agriculture uye Greenhouse.
Tsanangudzo:cob inotungamirwa inokura,tungamira kukura,inotungamirwa ikure,yakazara kumeso yakatungamirwa ikure,1000w yakatungamirwa ikure,
Zvigadzirwa zve PH COB Series , isu tiri vashandi vanobva kuChina, cob inotungamirwa inokura , tungamira kukura vatengesi / firisi , mabhizimisi ekugadzirwa kwezvakakura zve inotungamirwa ikure R & D nekugadzira, isu tine shanduro yakakwana yekutsvaga kutengesa uye kutsigirwa kwekambani. Tarisira mberi kubatana kwako!
Phlizon CREE COB X2 245W Kukura Chiedza
2019 Nyowani Nyowani Cob Yakatungamirirwa Kukura Chiedza
Phlizon 450w COB LED Kura Chiedza Ongororo
Phlizon Veg & inoyerera COB 2000W
Phlizon 450W COB LED Kura Mwenje
Phlizon 2000W COB LED Kura Chiedza
Yakakwirira mhando 2000W COB LED Mwenje
Phlizon 600W COB LED Kura mwenje
Phlizon COB 600W LED Indoor Kura Mwenje
Phlizon Cree COB 630W Yakatakurwa Chiedza
2019 New Arrival Phlizon LED Chekukura Chiedza Chiedza
COB LED Kura Chiedza 4000k LED Kukura Mwenje
Kupenya Kwakazara Spectrum 1500W COB LED Kura Chiedza
Phlizon 320W LED COB Kura Chiedza
CREE COB 320W LED Kura Chiedza
COB LED Kura Mwenje Yakakwana Spectrum Hydroponics Indoor
Phlizon COB nhepfenyuro inokura mwenje unoburitsa mamwe maawa emwenje ayo anogona kuve achibatikana zvizere nezvidyarwa kuti zvigadzire.
Yakanakisisa izere Spectrum yakagadzirirwa kunyatsoenderana nzvimbo dzakakura dzemukati zvinomera, kunyanya Medical Chigadzirwa.
COB + Dual-chip, inonyatsoita mukurumbira , yakakwira PPFD .Iye anotonhorera mafeni ane yakapetwa bhora (kuendesa kubva kuJapan) uye yakakura aluminium kupisa kunyura kuti udzivirire mwenje wekukura kubva pakakwirira kupisa, kutonhora kwakanaka, nguva refu yepamoyo.Photosynthesis nekusimudzira hutano kukura budding uye inoyerera.
1000w / 2000w / 3000w COB inotungamirwa kukura mbichana, inokupa iwe sarudzo dzakawanda apo zvidyarwa zvako zvinoda simba rakasiyana rekuvhenekera.
Kuroa Mwenje isarudzo yakakura kune varimi vari kubata nemoto unopisa weHPS uye vanoda kuchinja kune chimwe chinhu chave kuzomhanya kutonhora. Kunyangwe marobhu eMagetsi anokura uchigadzira kupisa, iwo mashoma mhando angasaunza kupisa kwenzvimbo yako yekukura. Kunyangwe iwo emhando dzakasimba dzeSME dzinokura mwenje dzinoburitsa kupisa kwakawanda dzichiri dzakavakira-mukati kutonhorera masisitimu kuti ubatsire kudzivirira kupisa kupisa zvakananga pasi pane izvo zvirimwa zvako.
1000w 2000w 3000w 400w akatungamirwa kukura mwenje Zvinyorwa
Mifananidzo yakazara ye2000w 2000w 3000w 400w cob inotungamirwa inokura
Kubhadhara: T / T, L / C, Paypal, 30% deposits usati wagadzirwa, 70% ibhadharo inofanira kubhadharwa usati waendesa (Western Union inogamuchirwa)
Muenzaniso uchaunzwa mukati memazuva manomwe ekushanda.
Zvidimbu zvinopihwa zvichienderana neyakafanira odhi.
Nzira dzekutumira: DHL, UPS, FedEx, TNT, suo pasuo, negungwa, nemhepo, nezvimwe.
PHLIZON KUTARISIRA KWAVADZIDZISI KUTI PESE PENYU
Kana iwe uri kufarira, uye
1.own dzakati wandei chitoro chekurima mumusika wako wemunharaunda
2.or mubhizinesi rekukura mwenje michina
3.or kana hukama hwakanaka nemukushi kana muridzi wegreenhouse
Kuti uve unogovanisa, rutsigiro rukuru ruchapihwa:
3.new chigadzirwa rutsigiro
Maawa 4.24 mushure-yekutengesa basa online
cob inotungamirwa inokura
yakazara kumeso yakatungamirwa ikure
1000w yakatungamirwa ikure
Cob Inotungamirwa Taa